“Jabhaddayadu Sidii Caarre Magan-gali Mayso Qardho Ee Waxa Ay Joogtaa Ceerigaabo Illaa Berbera, Maxamed Kaahinna Xilkii Waxaa Looga Qaaday Cali Warancadde Ee Ha Is Casilo” | Foore News
Home Aragtida Dadweynaha “Jabhaddayadu Sidii Caarre Magan-gali Mayso Qardho Ee Waxa Ay Joogtaa Ceerigaabo...
“Jabhaddayadu Sidii Caarre Magan-gali Mayso Qardho Ee Waxa Ay Joogtaa Ceerigaabo Illaa Berbera, Maxamed Kaahinna Xilkii Waxaa Looga Qaaday Cali Warancadde Ee Ha Is Casilo”
Stockholm, May 09, 2020– (Foore)- Suldaan Ayaanle Rooble Dhuxul oo dadku u yaqaano Suldaan Af-Wanaaje oo ka mid ah Madax-dhaqameedka waaweyn ee Beelaha Bariga Burco iyo Galbeedka Sanaag oo ku sugan caasimadda Waddanka Sweden ee Stockholm ayaa waxa uu eeddo culus u soo jeediyey Xukuumadda uu hogaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isaga oo sida uu hadalka u dhigay sheegay in beeshooda dulmi badan lagu hayo, Jabhadda ay ku dhawaaqeena taageersan yihiin halka uu eedo u soo jeediyay Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo uu ku tilmaamay nin xilkiisa lagu dul maamulo.
Suldaan Ayaanle Rooble Dhuxul oo waraysi gaar ah siinayay Telefishanka Bulsho TV isaga oo ku sugan waddanka Sweden ayaa waxa uu yidhi: “Fadhigaab waxa dil ku dhex maray laba reer, markii dilkaasi dhacay dawladdu si ka duwan sidii hore ayay u maaraysay si ka duwan sidii hore ayay u macal qabatay. Waxa ay ahaan jirtay marka laba reer is dilaan in la kala dhex galo kadibna dadkii u kala gar qaadi lahaa loogu yeedho. Taasi may samayn oo way ku guurtay waxaanay meesha la tagtay illaa 60 gaadhi oo tikniko ah iyo saddex kun oo askari. May dhexdhexaadine reer bay cagta dhabarka ka saartay. Beesha Axmed Faarax ayay eryatay. Xoolihii bay geel iyo adhiga ka qalatay. Maatada waxa ay u isticmaashay rasaas badan oo ay hantaaqday. Waan cambaaraynayaa taasi marka hore. Arrintaasi boobka xoolaha ah waxa aan ku caddayn karaa wiig buu socday. Waxa ay gaadheen meel aanay gaadhin dawladihii Aadan Cadde iyo tii waxashka ahayd ee Af-weyne. Illaa huluul iyo dhoomo iyo laasdhoomaarre ayaa la socday. Tuulooyin badan oo reerku dego oo aad uga fog intan laamigu maro ayaa la maray intaaba dadka waa lagu waxyeeleeyay. Dawladdu xaaladda Gobolka Sanaag way ku fashilantay waxaanay ugu darnayd markii halkii ay ka dhexdhexaadin lahayd ay reer cagta dhabarta ka saartay. Maxamed Kaahin Axmed iyo Cali Maxamed Warancadde ayaa meesha jooga. Aragtida noo muuqataana waxa weeyi in Wasiirka Maxamed Kaahin xilka laga qaaday oo laga dul galiyay Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Cali Maxamed Warancadde oo ah wasiir suge. Wasiir Maxamed Kaahin waxaan u soo jeedin lahaa in uu is casilo oo garto in xilka laga qaaday. Dawladdu Arrinka Ceel Afweyn may maarayn kari waayin ee wax kale ayaa meesha ku jira. Waxa la isku dirayaa waa dadkii Habar Jeclo iyo Garxajis ee iyagu ha u kacaan wax ka qabashadeeda”.
Suldaan Ayaanle Rooble Dhuxul oo ka hadlayay jabhadda deegaankooda lagaga dhawaaqay waxa uu yidhi: “Ragga Jabhadda ku dhawaaqay waxa ay ka baxeen Ceel Afweyn. Buurta Siraadlay bay tageen. Jabhadda sida magaceeda ka muuqata waxa la yidhaa Xaqdoon laba arrin baa ujeedadoodu ugu waaweyn. Midi waa dadka ay ka dhasheen ee deegaankoodaasi ah oo 30 sannadood wixii ay Somaliland xaq ugu lahaayeen aan ka helin. Adeegga Bulshada, horumarka iyo mashaariicda. Isaga oo Bari hadhay ayaa deegaankaasi isna sii hadhay. Beeshuna way la qabtaa. Qodobka labaadna waxa weeyi saami qaybsigii beesha nimankan Jabhadda ku dhawaaqay ay ka soo jeedaan ay ku lahaayeen saami qaybsiga dawladda dhexe iyo ta gobolkaba beeshu way ka madhan tahay. Tusaale ahaan ciidamada kala duwan ee Milatariga, Booliska iyo kuwa badda intii beeshaasi kaga jirtay marbaa xilalka laga wada qaaday oo Muuse Biixi ka qaaday. Gobolka Sanaag 60% baanu ka nahay waxaanu xaq u leeyahay isaga oo aan cidna boobayn in uu wixiisa si caddaalad ah u helo. Jabhadda waannu teegaarsanahay, waayo waxaannu aragnaa 30 kaa sano waxa nalagu hayay. Inta aanu xaqayaga helayno waannu u halgamaynaa. Jabhaddii hore waxa ay taayadani kaga duwan tahay Jabhaddii hore waad ogtihiin in ay beelaha is dilay mid hiil u ahayd oo waad og tihin Caarre markii uu lahaa reerkayaga Ayaan raacayaa. Taasi waxa ay ku milantay reeraha is dilayay. Tani laakiin waxa ay ku jihaysan tahay tabashada beeshooda oo kali ah wixii ay ka qaban lahayd cid kale kuma aha duullaan. Waxa kale oo ay kaga duwan tahay Jabhaddani waa mid dad iyo dal ballaadhan haysata. Ma aha Jabhad Magan galaysa Qardho iyo Badhan Ma aha Jabhaddii 20 Kiiloo Mitir xagga horena Tabca la isaga taagay halka kalena laga soo duubay, waa Jabhad Haysata Deegaanka u dhaxeeya Ceerigaabo Illaa Berbera, Illaa Xiis Illaa Hayayaal. Waa Jabhad xaqdoon ah oo cid kasta oo Somaliland xuquuq kaga maqan tahay aannu ugu baaqayno in ay nala xoojiyaan. Xal aan Jabhad ahayn waanu waynay oo muddo dheer bay odayaasha, salaadiinta iyo waxgaradka beeshani ku soo noqnoqonayeen xukuumadda oo tabashadayada la dhigayay Miiska Madaxweynaha oo uu dhagaha ka furaystay. Mudane Madaxweyne shan sanandood baa laguu doortay in aad umaddaa saddexda Milyan ah hogaamiso ee laguuma dooran in aad baloodho iyo Huteelo dadka ka qaaddo” ayuu yidhi Suldaan Ayaanle Rooble Dhuxul oo waraysi dheer ka bixiyay xaaladda deegaamadooda iyo arrimo badan.
Previous articleMa Dhabaa In Barxadda Dhinaca Galbeed Ka Xigtay Dhakhtarka Weyn Ee Hargeysa La Doonayo In Cid Gaar Ah Laga Xaraasho?
Next articleShirkadda TELESOM Oo Deeqdii Ugu Badnayd Ugu Yaboohday Guddida Ka Hortagga COVID19